SIDA 2008: Miady amin’ny SIDA sy miady amin’ny fankahalana pelaka · Global Voices teny Malagasy
SIDA 2008: Miady amin'ny SIDA sy miady amin'ny fankahalana pelaka
Voadika ny 08 Oktobra 2018 7:22 GMT
Raha vao tapitra ny Fihaonambe Iraisam-pirenena XVII momba ny SIDA natao tao an-tanànan'i Mexico, iray tamin'ireo olana goavana noresahan'ireo mpandray anjara ny tsy fahombiazan'ny iraisam-pirenena amin'ny fiatrehana ny VIH/ SIDA eo amin'ny lehilahy izay manao firaisana amin'ny lehilahy hafa, izay matetika antsoina hoe MSM.
Bilaogin'ny SciDev.Net milaza hoe:
“Tamin'ny taompolo 1980, raha sambany vao fantatra ny VIH, dia avo dia avo ny tahan'ny VIH/SIDA teo amin'ireo pelaka ka nantsoina hoe ‘pestan'ny pelaka’ io aretina io. Niova ny toe-javatra, ary nasehony fa ny viriosy sy ny aretina dia mety – ahoana no fomba fiteny – ho ‘demokratika’ (!), izay mahakasika ny lehilahy, ny vehivavy ary ny ankizy.
Na izany aza, nampiseho ny angona siantifika fa ny tahan'ny VIH/SIDA eo amin'ireo “lehilahy manao firaisana amin'ny lehilahy (MSM) dia manjary miha-ambony kokoa”.
Noresahan'ireo manampahefana isan-karazany nandritra ny fivoriana fanokafana ny fihaonambe ny olana momba ny fiarovana ny MSM, anisan'izany ireo mpitarika avy amin'ny Firenena Mikambana sy ny Sampan'ny Firenena Mikambana misahana ny Fahasalamana, ary ireo filoham-pirenena avy any Meksika, Botswana ary St. Kitts sy Nevis.
Nohamafisin'ny tatitra navoakan'ny amfAR (American Foundation for Research on SIDA-Fikambanana Amerikana misahana ny Fikarohana momba ny SIDA) nandritra ny fihaonambe ihany koa izany. Mampiseho ny fanadihadiana fa ny MSM maneran-tany dia 19 avo heny mety ho tratry ny otrikaretina VIH noho ny olona hafa amin'ny ankapobeny. Any Amerika Latina, izay anatontosana ny fihaonambe, 33 avo heny mety ho tratry ny aretina noho ny vahoaka amin'ny ankapobeny ny MSM, saingy latsaky ny 1 isanjaton'ny fitambaran'ny fandaniana amin'ny VIH/SIDA ny programa mikendry ny MSM.
Nahita ihany koa ny tatitra fa tsy ampy ny angona momba ny MSM. Tamin'ireo firenena 128 nohadihadiana, tsy nahavita nanome tahirin-kevitra momba ny pelaka sy ny lehilahy tsy manavaka karazan'olona iraisana (bisexual) ny 44 isanjato.
Walt Senterfitt, mibilaogy ao amin'ny aids2008.com, manombatombana momba ny antony tsy fahampian'ny vaovao.
“Antony iray lehibe mahatonga ny tsy fahampian'ny fahalalantsika dia mitovy amin'ny antony mahatonga ny lehilahy pelaka sy ny MSM hafa tsy raharahiana na atao tsirambina hatrany amin'ny hafatra fisorahana ny VIH sy ny famatsiam-bola ary ny antony mahatonga ny pelaka iharan'ny fisamborana, famonjàna, daroka ary fahafatesana any amin'ny faritra maro manerana izao tontolo izao: Fankahalana pelaka, fanilikilihana, fanavakavahana.
Peter Piot [Tale mpanatanteraka ao amin'ny UNAIDS] nanasongadina ny hetsika fanentanana ao amin'ny Departemantan'ny fahasalamana an'ny governemanta Meksikana miady amin'ny fankahalana pelaka ho toy ny fiavahana manokana ho an'ny ankamaroan'ny governemanta izay tsy miraharaha ny fankahalana pelaka na mampiroborobo fatratra izany.
Gus Cairns, mibilaogy ao amin'ny aids2008.com ihany koa mizara ny fanantenany ny amin'ny mety ho fiantraikan'ity fihaonambe ity amin'ny MSM.
“Nanantena aho fa ity valan-dresaka ity no ho kihon-dalana ho amin'ny fankatoavana ny lehilahy pelaka/MSM any amin'ireo firenena izay tsy misy anay amin'ny fomba ofisialy, na voafonja na voadaroka na diso ampitahorina loatra mba tsy hisehoseho
Ary manantena mafy aho fa ho izany tokoa, saingy ho ady izany. Namaky ny bokin'i Elizabeth Pisani “The Wisdom of Whores (Ny Fahendren'ny Mpivaro-tena)” aho ary manana zavatra marobe hotantaraina mikasika ny fomba nandraisan'izao tontolo izao ny foto-kevitra ‘Mifindra amin'ny rehetra ny SIDA’ izy satria mampatahotra loatra sy tsy dia mety ny mampihetsika ireo mpanao politika mba hanao zavatra mahafinaritra ho an'ny olona tena voakasika, tondroina hoe “vondrom-piarahamonina marefo” na (ary hiaraka amin'i Elizabeth aho amin'ny fampiasana ireo teny izay tsy miseho amin'ny fanambarana politika), ny “pédé an'izy ireo”, ny junkies ary ny mpivaro-tena. “
Iray amin'ireo lohahevitra tamin'ny Diabe Iraisam-pirenena voalohany miady amin'ny Fanilikilihana, ny Fanavakavahana, sy ny Fankahalana Pelaka ny fanantenana, izay nitranga ny andro talohan'ny nanombohan'ny fihaonambe mba hanoherana ny fanavakavahana ireo olona mitondra ny otrikaretina VIH ary manasongadina ny fankahalana pelaka.
Si Soy Gay mamariparitra ny diabe:
“Olona an'arivony no nanao diabe manohitra ny Fankahalana Pelaka, nanomboka tao amin'ny Angel of Independence ao amin'ny Arabe Paseo de la Reforma ao amin'ny trano fandraharahan'ny pelaka ao Mexico City ary nitohy tao Reforma ary nifarana tao Zocala, teo anoloan'ny Lapam-panjakan'ny Filohan'i Méksika. Tena diabe iraisam-pirenena tokoa ity satria nisy ireo olona avy amin'ny firenena maneran-tany: Etazonia, Amerika afovoany sy Atsimo, Angletera, Eoropa, Azia ary Afrika. “
Charles Long namoaka ity lahatsary ity momba ny diabe.
Nilaza i Gus Cairns fa na dia miatrika olana maro aza ny ady amin'ny VIH/SIDA eo anivon'ny MSM maneran-tany, dia nanome fanantenana azy ny diabe.
“Ny fahitana fotsiny ireo sora-baventy ao amin'ny diabe ao Meksika – manomboka amin'ny hoe ‘olan'ny fahasalamam-bahoaka ny fankahalana pelaka’ hatramin'ny sora-tanana nolanjain'ilay vehivavy lehibe milaza amin'ny teny espaniola sy anglisy hoe, ‘Mirehareha amin'ny zanako lahy pelaka aho’, – dia manome fanantenana ahy fa natahotra tokoa ny sasany tamintsika ary manantena zavatra maro: ny famerenana indray ny ady amin'ny VIH, fa amin'izao fotoana izao dia mety hanomboka hipoitra ny fisarihana ny herin'ny lehilahy pelaka/MSM manerantany.
Walt Senterfitt mandefa fandinihana momba ny diabe ihany koa.
“Mampahatsiahy ahy izany fa manana hery hiadiana amin'ny fankahalana pelaka manerana an'izao tontolo izao isika, raha mihetsika isika, ary mifandray amin'ireo tolona hafa ho amin'ny rariny ara-tsosialy izay fototra ihany koa ho an'ny ady hamaranana ny SIDA.
Sarin'ny AIDS Ribbon on Sidewalk avy amin'ny new1mproved ao amin'ny Flickr.